Gcina ibhethri ku-Apple Watch yakho | Izindaba zamagajethi
El I-Apple Watch Akungabazeki ukuthi ingenye yamadivayisi ezinkanyezi kulokho esinakho ngo-2015, okufeze izibalo ezinkulu zokuthengisa emakethe futhi futhi okwazile ukwanelisa iningi labasebenzisi abalithengile. Ngokwezifundo ezahlukahlukene, kuze kufike kuma-97% wabasebenzisi abathenge enye yama-smartwatches akwa-Apple banelisekile ngokuthengwa kwabo.
Nokho, Ukwaneliseka okubanzi akuholelanga ezinkingeni zokuzimela zebhethri ezenzekile kuwo wonke amadivayisi alolu hlobo kwazise kungekudala kakhulu bangene emakethe. Njengamadivayisi eselula, kuyadingeka ukuthi ubakhokhise cishe kuzo zonke izimo, yize kuncike ekusetshenzisweni, nsuku zonke, okuthile okungathandwa kakhulu yinoma ngubani.
Ngaphezu kwalokho, kokunye, impilo yebhethri ye-Apple Watch ayikuvumeli ukuthi "iphile" kuze kube sekupheleni kosuku, ngakho namhlanje besifuna ukudala lolu hlu lwamathiphu ayi-10 ongonga ngawo ibhethri ku-Apple Watch yakho futhi ngaleyo ndlela ikwandise ikakhulukazi ekuzimeleni kwabo.
Uma une-smartwatch ye-Apple futhi ibhethri lingafiki ekupheleni kosuku noma lingahlali isikhathi eside njengoba ubulindele, buyekeza amathiphu ozowathola ngezansi ngoba mhlawumbe ukusebenzisa ezinye zazo kuzoxazulula izinkinga zakho nezedivayisi yakho.
1 Khawulela izaziso
2 Qala kabusha i-Apple Watch njalo kaningi
3 Faka kuphela izinhlelo zokusebenza ezibalulekile
4 Misa izinhlelo zokusebenza ocabanga ukuthi zisebenzisa kakhulu
5 Gqoka iWatchFace emnyama noma okungenani umbala omnyama
6 UMickey muhle kodwa udla ibhethri
7 Yenza kungasebenzi inketho "phakamisa isihlakala"
8 Sebenzisa imodi "Ungaphazamisi"
9 Imodi yendiza, umlingani wakho omkhulu ezikhathini ezibucayi
10 Yenza kusebenze imodi yokulondolozwa kwamandla
Amawashi ahlakaniphile avumela phakathi kwezinye izinto eziningi thola izaziso kusuka kudivayisi yethu yeselula khona manjalo, futhi uziphendule. Ngeshwa lokhu kudla inani elikhulu lebhethri, ikakhulukazi uma sinezinhlelo zokusebenza eziningi ezilungiselelwe ku-smartwatch yethu ukuze zingaziswa.
I-WhatsApp, iTelegram, i-Twitter noma i-Facebook kungezinye zezicelo eziningi ongathola kuzo izaziso. Njalo lapho sithola isaziso, isibuko se-Apple Watch siyakhanya bese kusetshenziswa i-bluetooth, okuthinta ibhethri.
Ukugcina ibhethri nokunweba ukuzimela kwedivayisi yethu lungiselela kuphela izinhlelo zokusebenza ezibalulekile ofuna ukuthola izaziso ezivela kuzo.
Qala kabusha i-Apple Watch njalo kaningi
Ukuqala kabusha idivayisi yezobuchwepheshe kuyinto ochwepheshe abaningi abavame ukuyincoma ukuxazulula izinkinga eziningi ezingavela, kufaka phakathi ukusetshenziswa kwebhethri ngokweqile. Ku-Apple Watch kwenzeka ngokufana ncamashi futhi ukuthi ukuqala kabusha kwedivayisi kungaxazulula izinkinga ezimbalwa.
Futhi ukuthi uma uqala kabusha noma ucisha i-smartwatch zonke izinqubo ezisebenzayo ziyavalwa futhi ziqale phansi. Uma kwenzeka omunye wabo esebenza ngokungafanele futhi ngokwesibonelo echitha ibhethri eliningi kunesidingo, lokhu kuzosivumela ukuthi sikhulise ukuzimela.
Uma une-Apple Watch, qala kabusha njalo futhi lokhu kungakususa endleleni yenkinga engathandeki, ehlobene nebhethri noma enye into. Khumbula ukuthi ukuqala kabusha, kufanele ucindezele futhi ubambe umqhele wedijithali nenkinobho eseceleni kuze kube mnyama isikrini.
Faka kuphela izinhlelo zokusebenza ezibalulekile
Akunakugwenywa ukufaka inqwaba yezinhlelo zokusebenza kuma-Smartphones noma ama-smartwatches, esingajwayele ukuwasebenzisa kamuva nokuthi sihamba lapho ngaphandle kokuwasebenzisa. Kwezinye izimo lezi zinhlelo zingaqhubeka zisebenze ngemuva, zisuse izinsiza futhi zimoshe nebhethri.
Iseluleko sethu ukufaka kuphela izinhlelo ezibalulekile ku-Apple Watch yakho ukonga ibhethri nezinsizakusebenza. Siyazi ukuthi ukufaka izinhlelo zokusebenza kanye nezinye izinhlelo zokusebenza cishe akunakugwenywa, kepha zama ukuzibamba futhi uzobe wenza ibhethri ledivayisi yakho umusa. Lesi seluleko singasetshenziselwa i-iPhone yakho futhi ngokujwayelekile kunoma iyiphi idivayisi.
Misa izinhlelo zokusebenza ocabanga ukuthi zisebenzisa kakhulu
Akuvamile kakhulu ukuthi uhlelo lokusebenza lusebenzise ibhethri eliningi kakhulu ku-Apple Watch yethu, kodwa Uma ubona ukuthi ngemuva kokubuyekeza uhlelo lokusebenza kudla ibhethri eliningi kakhulu, umqondo omuhle kungaba ukuwumisa ukugwema ukudla ibhethri. Ungacabanga nokukhipha ngokuphelele bese uyifaka ngenye.
Vele, khumbula ukuthi lokhu akuyona into ejwayelekile kakhulu futhi kuphela ezimweni ezikude lapho uhlelo lokusebenza ludla khona ibhethri ngemithamo emikhulu.
Gqoka iWatchFace emnyama noma okungenani umbala omnyama
Isikrini se-Apple Watch yethu yi-OLED, uhlobo lwesikrini oludinga amandla amaningi ukubonisa imibala ekhanyayo kunaleyo emnyama. Ngakho-ke, uma ufuna ukunweba ukuzimela kwedivayisi yakho kufanele ubeke iwashi elimnyama noma okungenani kumnyama.
Uma ungenandaba nokuzimela kwewashi lakho le-Apple smart, beka i-watchface oyifunayo bese uyayijabulela noma ungakhohlwa ukubuka ibhethri lakho futhi ugcine indawo ibonakala ukukhokhisa i-smartwatch sakho.
UMickey muhle kodwa udla ibhethri
Iningi lamawashi ahlakaniphile emakethe akuvumela ukuthi ubeke izizinda ezinopopayi njengobuso bewashi, esimweni se-Apple Watch akuhlukile futhi ngokwesibonelo singabeka uMickey ukuthi asitshele isikhathi. Lezi zizinda ezigqwayizayo zisebenzisa inani elikhulu lebhethri ezimweni eziningi ngakho-ke isincomo sethu uma ufuna ukunweba impilo yedivayisi yakho ukusisusa.
Ukuze ukwazi ukwenza kungasebenzi ukunyakaza kanye nokugqwayiza kwe-Apple Watch yakho, uzobona ukufinyelela kusuka kuhlelo lokusebenza lwe-Apple Watch ku-iPhone kuya kwinketho ejwayelekile, bese ufinyeleleka lapho kufanele usebenzise izinketho "Nciphisa ukunyakaza" nokuthi "Nciphisa ukuguquguquka" .
Yenza kungasebenzi inketho "phakamisa isihlakala"
I-Apple Watch isinikeza ukuthi kungenzeka ukuthi isikrini sayo sivuleke njalo lapho siphakamisa isihlakala sethu. Lokhu kusho ukuthi ngaso sonke isikhathi lapho siphakamisa isihlakala sethu ukuze sibheke iwashi, isikrini sayo siyakhanya ngaphambi kokuthi siyibheke, into engangabazeki ukuthi ikhululekile kakhulu. Inkinga ukuthi ngaso sonke isikhathi lapho siphakamisa isihlakala, ukwenza noma yini isikrini sivuleka ngemfucuza ebangelwa ibhethri.
Uma ungafuni ukubona ukuthi ibhethri lakho lichitheka kanjani ngendlela engenamsebenzi, cisha inketho ethi "phakamisa isihlakala". Uzobona ngokushesha ukuthi ukuzimela kwe-Apple Watch yakho kukhula kanjani, yize lokho uma isikrini sewashi lakho singakhanyisi ngokusiphakamisa nje.
Sebenzisa imodi "Ungaphazamisi"
El Imodi ye-Apple Watch "Ungaphazamisi" Njengakwi-iPhone, ivumela idivayisi ukuthi isebenze ngendlela ejwayelekile, yize isikhathi ngasinye sithola isaziso isikrini ngeke sikhanye, ngeke sikhale noma sidlidlize ngokulondolozwa kwebhethri okucacile.
Uma, ngokwesibonelo, i-Apple Watch yakho iphansi ngamandla webhethri, ukwenza le modi kube yindlela enhle yokwengeza ukuzimela ngokuhamba kwesikhathi.
Imodi yendiza, umlingani wakho omkhulu ezikhathini ezibucayi
Imodi yendiza ishiya i-Apple Watch icishe ifane newashi elijwayelekile ngaphandle kokwenzeka kokwenza noma yisiphi isenzo esidinga i-WiFi noma i-Bluetooh. Lokhu kusho ukuthi singaqhubeka nokwenza ezinye izinto ku-smartwatch yethu, noma kungenzeki ngokuphelele njengoba bekungenzeka uma singasebenzisi le modi.
Yenza kusebenze imodi yokulondolozwa kwamandla
Amadivayisi amaningi aya efaka imodi yokonga amandla ne-Apple Watch Yebo nayo iyasinikeza. Le modi isivumela ukuthi sifinyelele ekupheleni kosuku, ngokwesibonelo, uma sinebhethri eliphansi futhi i-smartwatch esebenzisa le modi izoba iwashi kuphela.
Njengoba sihlala sisho, lawa amathiphu ayishumi nje kuphela amaningi amaningi akhona okonga ibhethri ku-Apple Watch yakho. Futhi, njengenjwayelo, singathanda ukuthi usitshele ukuthi isiphi iseluleko esisishiyile noma ukuthi yini oyisebenzisayo ukuzama ukunweba ukuzimela kwewashi lakho elihlakaniphile elivela enkampanini esekwe eCupertino.
Uke waqaphela impilo yebhethri elinganiselwe kakhulu ku-Apple Watch yakho?.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » SmartWatch » Izeluleko eziyi-10 zokonga impilo yebhethri ku-Apple Watch yakho
Ungamisa kanjani Windows 10 ekukuhloleni